> Resource > masixi > Sidee loo nadiifiyaa tuuryo Broken in Windows
Barnaamijyada badankoodu waxay abuuri doonaa tuur marka ay ku rakibidda, loogu talagalay isticmaalka. Laakiin mararka qaarkood, inaan iyaga laga bixin karaa marka uninstall barnaamijyada, oo waxay noqon tuuryo jabeen ama jebiyey. Tuuryo aan saxnayn waa files agoon ay ka tageen, inta lagu guda jiro uninstallation barnaamijka iyo tirtirka file / folder. Waxa ay kala firdheen, Desktop ah Startmenu iyo geesood ka mid ah nidaamka. Tuuryo junk Kuwani dayacno aad disk iyo nidaamka khayraadka. Markaas, sida aan ka saari kara kuwa aan waxba ka jirin tuuryo?
Ma ahan si adag sida aad u malaynaysaan inaad nadiifiso tuuryo jabay in Windows, si aad maaliyada ku saabsan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay oo kaliya nadiifsan toobiye ah. Haddii aadan haysan mid, waxaa jooga talo: Wondershare WinSuite 2012 . Tani waxay nadiifiye toobiye jabay caawin kartaa in aad ka saarto oo dhan tuuryo aan waxba ka jirin kala firdheen oo aad Desktop, Startmenu iyo meel kasta oo ka mid ah nidaamka. Waxaad ka heli kartaa oo wada nadiif ah oo la mid click.
Step1. Orod software nadiifsan toobiye ah
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Guji "Hubi & TuneUp" dusheeda oo taga si "Coobbi toobiye" ku menu dhinaca bidix ah oo ka hooseeya "Windows Nadiifinta", ka dibna riix "Coobbi toobiye", badhanka cagaaran ee xarunta u dhaqaaqo.
Step2. Bilow baar your computer
Next, guji "Start Scan" si loo baadho oo heli tuuryo jabay on your computer.
Step3. Tuuryo jabay Nadiif ah
Dhowr ilbiriqsi ka dib, dhammaan tuuryo jabay ku saabsan habka waxaa laga heli doonaa oo ku qoran sidan. Iyaga oo dhan Waxaad calaameysaa oo guji "Clean Up" in ay ka saarto tuuryo aan waxba ka jirin.
Intaa waxaa dheer, barnaamijka Weli leedahay badan oo hawlaha si aynu inaad saxdaa tuneup your computer, iyo sidoo kale maamuli lahayd gaarka ah, sirta ah iyo maqaal qoruhu disk, xitaa soo kabsado xogta lumay.